Izakhiwo | Umlimi wasemadlelweni we-intanethi | March 2020
Ungasusa kanjani i-parsnip yenkomo futhi uzivikele ekushiseni
I-Hogweed - isitshalo esiza kithi eCaucasus eminyakeni engaphezu kwengu-70 eyedlule, siqhubeka ngenkuthalo nokwandisa ububanzi bayo, sithatha amasimu amasha amaningi. Izakhamuzi zasehlobo nezabalimi bathi i-hogweed imelela usongo langempela: izitshalo ezitshalwe emasimini nasemasimini ethu; kubantu (ikakhulukazi izingane kanye nabantu abadala); for flora zendawo kanye nezilwane.
Senza imibhede ku-greenhouse ngokufanele: indawo, ububanzi, ukuphakama, isithombe
Ukulungiselela imibhede endlini yokushisa, inqubo edinga indlela ekhethekile. Ukuphumelela ekutshaleni imifino kuncike endaweni yabo efanele kanye nokuklama. Yingakho umbuzo wendlela yokwenza imibhede ibe yibamba lokushisa kubaluleke kakhulu kubalimi abaningi. Imibhede ebamba lokushisa itholakala ngokuhambisana namaphuzu asemakhadini. Ukuthi imibhede izotholakala kanjani kubamba lokushisa kumele kucatshangelwe esigabeni sokufakwa kwayo.
Sakha inqolobane ukunikela ngezandla zabo ngokushesha futhi ngokungazi lutho
Yiqiniso, ngaphandle kwenqolobane esakhiweni kunzima kakhulu. Ithuluzi elifanayo legadi lihlungwe. Imbewu. Kuvuna. Ibhayisikili. I-Wheelbarrow Yebo, izinto eziningi. Ukuze ungadonseli indlu yonke, kune-shed. Yebo, ungakwazi ukuqasha abakhi, futhi bazokwenza konke okukuyo. Kodwa kungenzeka ukuthi wenze umcengezi ngezandla zakho, uma wazi ukuthi i-nail ihluke kanjani kusikrini.
Ukwakha ikamelo elisha ngezandla zakho
Igumbi elingaphakathi igumbi lokugcina izithelo, imifino, imikhiqizo ehlukahlukene kanye nempahla. Ngenxa yezinga lomswakama kanye nobubanzi bokushisa obusekelwe, i-cellar isebenza njengenhlobo "yokupholisa" kwemikhiqizo, futhi ikuvumela ukuba uhlale uhlanzekile isikhathi eside. I-cellar ngokuvamile idingekile ezindlini zezwe kanye namakamelo.
Isisekelo sokubamba ukushisa ngezandla zabo siqu: izinhlobo, izincomo, izithombe
Abalimi abaningi, okwenza isinqumo sokwakha i-greenhouse esakhiweni, ungacabangi ngesisekelo esinokwethenjelwa kuso. Yiqiniso, i-greenhouse ayiyona isakhiwo sezimali futhi umthwalo osenhlabathini kuwo uyinto encane. Ngakho-ke, abaningi bakholelwa ukuthi isisekelo esinokwethenjelwa sidinga kuphela izakhiwo zasendlini ezinkulu, futhi ukukhanya okuvamile okushisa kungafakwa ngqo emhlabathini.
Ukwenza i-garden effigy ngezandla zakho
Umuntu onamahloni ovela emasimini nasemasimini ezweni lakithi akakwazi ukuhlangana. Kuthi mayelana nokuthungula! Iphoyinti elimnandi leminyaka leminyaka lalivikela isivuno kusuka ekufeni. Futhi manje ukhohliwe, futhi ngeze. Mhlawumbe isikhalazo asisasetshenziswa njengesivikeli esivela ezilwaneni ezincane noma ezinyoni. Noma kunjalo, ingxenye ye-esesthetic ayikhanseliwe.
Senza ngokuzenzekelayo ukuchelela insimu
Izitshalo zethu yizilwane zethu ezifuywayo, kodwa kaningi asikwazi ukuba nabo phakathi nowashi. Uma ujwayele le nkinga, qaphela ukugeleza okuzenzekelayo kwensimu nemifino yemifino - lokhu ngeke kukugcine kuphela ukuvakashelwa kwesikhashana, kodwa futhi kulondoloze imali. Ungacabangi ukuthi "othomathikhi" kuhilela idivayisi ehlakaniphile, okungekho, iyobiza imali enhle.
I-do-it-yourself yezwe lokugeza - induduzo nokuqinisekiswa okuqinisekisiwe
I-cottage ihlale inika umoya omuhle, noma ukuphumula okuphelele okuvela emadolobheni amakhulu okuphila emgodini wemvelo. Umuntu ngokushesha uzothanda ukuba yedwa nehlathi, umfula, izilwane, isibhakabhaka, ilanga ngangokunokwenzeka. Kumnikeza ukuthula nomzwelo omkhulu. Phindela manje "kusukela ezulwini kuya emhlabeni."
Abaphakeli bezinyoni bazenza ngokwakho kusuka ezintweni ezibucayi
Ukondla izinyoni ungazimela ngokuzimela ophakelayo noma ukudlala amatafula ezinsimbi ezihlukahlukene. Ngokuvamile, amabhodlela eplastiki, amabhokisi amakhadibhodi noma i-plywood asetshenziselwa abahlinzeki. Isakhiwo esiqediwe siphonswa esigxotsheni noma esihlahleni, futhi singasungulwa odongeni lwesakhiwo.
Izinhlobo kanye nezakhi zokwakha gazebos ukunikela ngezandla zabo
Ayikho indawo yasemadolobheni yanamuhla ayikwazi ukucabanga ngaphandle kwe-gazebo ethokomele, lapho ungaphuza itiye elimnandi, uhlale nabangani noma uphefumule umoya osha ngenkathi ujabulela imvelo. Kuncike ekutheni i-arbor izobukeka kanjani, izinga lokuphumula lixhomeke. I-summer gazebo I-gazebo ye-Summer ingenye yezakhi ezibaluleke kakhulu eziqakathekile emkhakheni wezwe lezwe.
Ukwakhiwa kwezindlu zangasese zokhuni kuleli zwe ngezandla zabo
Lapho uhlela indawo yasemadolobheni, kudingeka wenze, okokuqala, ukusatshalaliswa kwensimu yayo ngaphansi kwalokho okudingekayo futhi kudinga ukunakwa kokuqala kwesakhiwo. Lezi zihlanganisa indawo yokugezela noma indlu yangasese. Ngaphandle kwalo, ukuhlala kuyoba njengokungathi kunzima njenganoma iyiphi enye igumbi noma into. Ukwakhiwa kwendlu yangasese kumele kwenziwe ngokuhambisana nemigomo yokuhlanza echazwe kumadokhumende okulawula.
Ukwakha i-trellis yamagilebhisi ngokwakho
Ukunquma ukuhlanganyela ekutshalweni kwamagilebhisi, kufanele kukhunjulwe ukuthi lesi sitshalo sinama-lian-like, asinaso isimo esithile, ngakho sidinga ukwesekwa. Eminyakeni emibili yokuqala emva kokutshala izihlahla zomvini zidinga ukwesekwa okwesikhashana - izigxobo. Eminyakeni emibili kamuva, kubalulekile ukwakha ukwesekwa okuhlala njalo.
Home smokehouse yenza ngokwakho
Indlu yezwe noma i-cottage yiyona engcono kakhulu yokuhlela indawo yakho encane yentuthu, okwenza noma nini ukuba ujabulele inyama enomusi ophuzi, ubhekeni, izinkukhu noma inhlanzi. Ukwakhiwa kwe-smokehouse ngeke kudinge izindleko zezimali ze-titanic noma ulwazi olujulile ekwakhiweni, futhi umphumela uzodlulela konke okulindelwe, ngoba akukho nenye yezinhlobonhlobo zokudla eziyinkimbinkimbi ingafaniswa nokudla okuzenziwe okuphekwe ngezandla zakho.
Sakha izicingo ezihlobisa ngezandla zabo
Ucingo lwembali luyinto enhle kakhulu futhi enhle kakhulu. Ubude bocingo bungahlukana kuye ngezifiso zamakhasimende. Vumelana, ngokuvamile uvame ukubhekana nombuzo wokufaka ucingo ophezulu kuyisinqumo esihlakaniphile. Lokhu kungenziwa ngenxa yezinto eziningi, kuhlanganise nokungahle kube yi-aesthetics.
Amathiphu ahlangene nabalimi ngokukhukhamba okukhulayo endaweni yokushisa
Ukuthola isitshalo esicebile samakhukhamba ensimini ngaphandle kwesimo sezulu esingalindelekile cishe umsebenzi ongenakwenzeka. Ngakho-ke, abalimi abaningi bemifino bazikhethela ukhetho lokukhukhamba kwamakhukhamba ezindaweni zokugcina izithombo. Kodwa-ke, ngale ndlela, kuzuzisa ukufunda imithetho eyisisekelo nokufunda izimfihlo zokuthola inani eliphezulu lezithelo ngesikhathi sehlobo.
Ubuchwepheshe bokudala ibhentshi engadini ukunikela ngezandla zabo
Ibhentshi kunoma iyiphi isayithi ithathwa njengomhlobiso. Noma yimuphi umnikazi wesayithi yezwe uyohlala ethola indawo yaleso sici, kungaba yindlu encane, i-cottage, indlu yezwe, noma isakhiwo esinengadini nensimu. Yiqiniso, manje imikhiqizo eminingi enjalo isemakethe, kodwa ngaso sonke isikhathi kungcono ukuhlomisa impilo yakho yedwa.
Izindlela zeJardin. Izakhi zokwenza kwakho-ngokwakho
Imigwaqo yaseJalimane ingaphezu nje komgqa ovuthayo ovumela ukuthi uhambe ngokuzungezile ensimini. Ayithwala umthwalo osebenzayo kuphela, kodwa futhi uyisici somhlobiso wesayithi lakho. Ngakho-ke, kubaluleke kakhulu ukuthi ukubukeka kwabo kufane ngokuvumelana nesimo sezwe jikelele.
Ubuchwepheshe bokukwakha idolovu eyenziwe nge-polycarbonate
I-canopy yindlela yokwakha ophahleni eyenzelwe ukuvikela kuzo zonke izinhlobo zemvula. Ekuqaleni, lezo zakhiwo zakhiwe emadolobheni. Ngemva kwesikhashana, ama-awnings aqala ukwakha njengendawo yokukhosela emvula emashalofini emigwaqo nasezimakethe. Isizukulwane emva kwesizukulwane, ikhulu leminyaka emva kwekhulu leminyaka, sekuholele ekutheni ububanzi bama-canopies bube bubanzi ngokungajwayelekile.
Yonke into emnandi mayelana nezithombo zokugcina zokugcina izitshalo ze-polycarbonate
Ngokungafani nokushisa okushisa, ukushisa ilanga kuphela, ukushisa okushisa ama-polycarbonate kunikezwa umthombo owengeziwe wokushisa (isibonelo, isitofu noma ungqimba lwamakhasi ama-pereperevayuschey). Ukushisa okwenziwe njalo ku-greenhouse kunikeza izitshalo ngemodi ewusizo nxazonke ukuze kukhule nokuvuthwa kwezithelo. Humushela incazelo emuva ku-isiNgisi Humusha Incazelo Lightweight, durable, multi-colored.
Okunye okunye okungafani nokushisa okushisayo: mini-greenhouse
Igama ngokwayo likhuluma ngobukhulu obuncane besakhiwo. Naphezu kobukhulu obusayizi obusuka ku-greenhouse obuhleliweyo obuhlelekile, abantwana abanjalo bavikela ngokuqinile izitshalo emiphumeleni emibi yemvelo. I-mini-greenhouse ibhekwa njengento encane yesakhiwo. Izakhiwo ezinjalo ziye zathola ukuthandwa ngenxa yokulula ukufakwa, ukulula, kanye nentengo engabizi.
Ukukhanya okuluhlaza, okuluhlaza futhi okuhlala njalo "Agronom"
Ukusebenzisa imodeli ye-greenhouse "Agronom" ingacatshangwa njengenye yezixazululo ezinhle kakhulu ngokusebenza kahle nangokulula, nokuhleleka nokuthembeka kohlelo. Lezi zici ezihambisana nokusetshenziswa kwezinsimbi zanamuhla zihlukanisa emgqeni wezithombo zokugcina zakudala futhi zinikeze ithuba lokuthola imiphumela ehloniphekile uma ukhula izithombo endaweni evulekile.
Ama-daisies aphuzi - izimbali zisetshenziswa
Ukupheka kokwenza ama-Brussels amahlumela epanini nangezinye izindlela
Ukunambitheka kwalezi zithelo ngeke kukushiye unganandaba - i-Tatiana pear
I-Coleus - ukutshala nokunakekela ekhaya
Amathiphu namaqhinga okuchelela izithombo ze-pepper: imvamisa efanele kanye nevolumu yokuchelela, umehluko kokuchelela ngaphambi nangemva kokukhetha, kunokuba ukuchelela ukukhula okuhle
I-Nepentes Predator Plant - Ukunakekelwa Kwasekhaya
Amagilebhisi anamandla anambitheka - i-Platovskiy ehlukahlukene